အကူအညီရယူပါ : ZawGyi Mart - E-Commerce Business In Myanmar
ဇော်ဂျီမတ်တွင် ရောင်းချပေးလျှက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူလိုကြသူများနှင့် တကွ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်း တစ်ခုထူထောင်လိုသူများ အတွက် E-Commerce Platform အားအသုံးပြုပုံပြုနည်းများကို ဤစာမျက်နှာတွင် ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါသည်။
ဘယ်လိုဝယ်ယူရမလဲ? ဘယ်လိုရောင်းချရမလဲ? အစရှိတဲ့ အခက်အခဲတွေ့နေသူများအတွက် လေ့လာလို့ရအောင် အောက်ဖော်ပြပါ အဓိက အချက်များကို စနစ်တစ်ကျလေ့လာလို့ရအောင် စီစဉ်ပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဘယ်လိုဝယ်ရမလဲ (How to buy?)
ဇော်ဂျီမတ်တွင် ရောင်းချလျှက်ရှိသော ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သူမဆိုလွတ်လပ်စွာဝယ်ယူ နိုင်ပါသည်။ ဇော်ဂျီမတ်ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်၌စျေးဝယ်ယူသည့်စနစ်ကို မိရိုးဖလာ အတိုင်းလွယ်ကူစွာဝယ်ယူနိုင်စေရန် ကြိုးစား ဖန်တီးထားပါသည်။ အင်တာနက်ကွန်ယက်အား အသုံးပြု၍ ဇော်ဂျီမတ်တွင်ရောင်းချသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူသူများသည် အသုံးပြုသူအနေဖြင့် (မှတ်ပုံတင်ပြီးသော) အကောင့်တစ်ခု တည်ဆောက်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ မည်ကဲ့သို အကောင့်တည်ဆောက် (မှတ်ပုံတင်) ရမည်ကို လည်းရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ အကောင့်တည်ဆောက်ပြီးသူများသည် အောက်ဖော်ပြပါအဆင့်တိုင်း လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာဝယ်ယူနိင်ပါသည်။
(၂) ဝယ်ယူလိုသောကုန်ပစ္စည်းအားအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသော စာမျက်နှာတွက် “Buy Now" ခလုပ်နှင့် “Add to Cart" ခလုပ် (၂) ခုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခြားကုန်ပစ္စည်းများကိုဆက်လက်ရွေးချယ်၍ဝယ်ယူလိုပါက “Add to Cart" ခလုပ်ကိုနှိပ်၍ ဆက်လက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပါသည်။
(၃) ဝယ်ယူလိုသော ပစ္စည်းများ (အရေအတွက်) ပြည့်စုံပါက “Buy Now" ခလုပ်ကို နှိပ်၍ (ဝယ်ယူသော ကုန်ပစ္စည်း ပို့ဆောင်ပေးရန်၊ ကျသင့်သောငွေပေးချေရန်) နောက်တစ်ဆင့်သို့ သွားလိုက်ပါ။
(၄) ပထမဦးစွာ ကုန်ပစ္စည်း ဝယ်ယူသူ လိပ်စာ “Billing Address" ကို့ဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ပို့ဆောင်ပေးရမည့်နေရာ (ဝယ်ယူသူနှင့် လက္ခံမည့်သူမတူလျှင်)မတူညီပါက ပို့ဆောင်ပေးရမည့်လိပ်စာ “Shipping Address" ကိုဖြည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) ဒုတိယအဆင့်အနေဖြင့် ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသောစနစ်များရှိသည့်အနက် ဝယ်ယူသူမှဆန္ဒရှိသော ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ပေးသောစနစ်အား စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
(ဥပမာ။ ။ နေ့ချင်းအရောက်ပို့စနစ်၊ နောက်တစ်နေ့အရောက်ပို့စနစ်၊ (၃) ရက်အတွင်းပို့ဆောင်ပေး သောစနစ်)
(၆) တတိယအဆင့်ကတော့ ငွေပေးချေတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဝယ်ယူသုံးစွဲသူအနေဖြင့် အဆင်ပြေလွယ်ကူ နိုင်သည့် ငွေပေးချေစနစ်ကိုသာ ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ (အချို့ဝယ်ယူသူများမှာ ငွေပေးချေသော စနစ်ကို တစ်ခုခုကို ရွေးချယ်အသုံးပြုထားပီးဖြစ်လို့ အဆင်သင့်ပေးချေဝယ်ယူနိုင်သော်လည်း၊ အချို့ ဝယ်ယူသူများမှာ အစိမ်းသက်သက် ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် ငွေပေးချေသော စနစ်များကို အောက်ပါလင့်တွင် သွားရောက်လေ့လာနိုင်ပါသည်)
(၇) ငွေပေးချေသော စနစ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးပါက ဝယ်ယူလိုသူ မှ မှာယူထားသောကုန်ပစ္စည်းကို ဇော်ဂျီမတ် မှ သက်မှတ်ချိန်အတိုင်းရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဇော်ဂျီမတ်ဝဘ်ဆိုဒ်တွင် စျေးဝယ်ခြင်းစျေးရောင်းခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာ ပြုလုပ်နိုင်ရန် အတွက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းအဆင့်ကို မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။
မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ရာ၌ လွယ်ကူရိုးရှင်းစွာပြုလုပ်နိုင်စေရန်ရည်ရွယ်၍ မှတ်ပုံတင်ထားသော အကောင့်ကို အတည်ပြုပေးရန် (မြန်မာ)မိုဘိုင်းဖုန်း နံပါတ်ဖြင့်သော်လည်ကောင်း အီးမေးလ်ဖြင့်သော်လည်းကောင်း စီစဉ် ဆောင်ရွက်ထားပါသည်။
(၁) မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်ဖြင့် အကောင့်ပြုလုပ်လိုသူသည်
အကောင့်ပြုလုပ်သူ၏ အမည် ကိုဖြည့်ရပါမည်။
အကောင့်ပြုလုပ်သူ၏ မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ် ကို နမူနာပြထားသည့် အတိုင်း ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ (ဥပမာ။ ။ +959253027001 (သို့မဟုတ်) 09253027001)
# မှတ်ချက် အော်ရီဒူး အော်ပရေတာ နှင့် တယ်လီနော အော်ပရေတာများသည်လည်း +95 (သို့မဟုတ်) 09 ကိုဦးစွာထည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။
မိမိအသုံးပြုလိုသောလျှို့ဝှက်ကုဒ် အက္ခရာ(သို့မဟုတ်) ကဏန်း (၆)လုံးနှင့် အထက်ကိုအသုံးပြု၍ ဖြည့်သွင်းရပါမည်။ ထို့နောက် “Register" ခလုပ်ကိုနှိပ်၍ မှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အကောင့်ပြုလုပ်စဉ် ထည့်သွင်းထားသော မိုဘိုင်းဖုန်းနံပါတ်သို့ ဇော်ဂျီမတ် ၏ Server Machine (၁) မိနစ်အတွင်း SMS (မက်ဆေ့ရှ်) ရောက်ရှိလာပါလိမ့်မည်။ ၎င်း SMS (မက်ဆေ့ရှ်) အတွင်း၌ ကဏန်းနံပါတ် (၆) လုံးကို တွေ့ရှိရပါလိမ့်မည်။ ၎င်း နံပါတ်(၆)လုံးကို ဖြည့်သွင်း၍ အကောင့်ကို အတည်ပြုပေးရပါမည်။ ထိုအဆင့်ကို ပြီးမြောက်ပါက မှတ်ပုံတင်သော အဆင့်အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
အကောင့်ပြုလုပ်သူ၏ အီးမေးလ်လိပ်စာ ကို ဖြည့်သွင်းရပါမည်။
အကောင့်ပြုလုပ်စဉ်ထည့်သွင်းထားသော အီးမေးလ်လိပ်စာသို့ ဇော်ဂျီမတ်မှ ပေးပို့သော အီးမေးလ် တစ်ဆောင်ရောက်ရှိလာ ပါလိမ့်မည်။ ထိုအီးမေးလ် အတွင်း၌ “Login to your account" ခလုပ်ကိုနှိပ်၍ အကောင့်အတည်ပြုနိုင်ပါသည်။ ထိုအဆင့်ကို ပြီးမြောက်ပါက မှတ်ပုံတင်သော အဆင့်အောင်မြင်စွာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ။
ဇော်ဂျီမတ် ဝဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင် ရောင်းချသော ကုန်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူရန်အတွက် အောက်ပါငွေပေးချေစနစ်များကို အသုံးပြု၍ငွေပေးချေနိုင်ပါသည်။
(၂) ၁၂၃ (ဝမ်းစတော့ပ်ဆားဗစ်) ငွေပေးချေစနစ်
(၃) အမ်ပီယူ (အေတီအမ်ကဒ်) ငွေပေးချေစနစ်
(၄) မြန်ပေး (အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်) ငွေပေးချေစနစ်
(၅) ပေးလ်ပယ်လ် (အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်) ငွေပေးချေစနစ်
(၆) စီဘီဘဏ် (မိုဘိုင်းဘဏ်) ငွေပေးချေစနစ်